Preamble by leasc 8346 views
For Myanmar Entrepreneurs learn from Singapore and China, Quality Business with least corruption
Ko Hein at CB Bank ( Co-operative Bank Ltd. )
1. Alternate ◌နnergy- China အလီဘာဘာနှင့်မြန်မာများ Alibaba.com ဘ၀အစပြုခြင်း Jack Ma ၁၉၆၄တွင် မွေးဖွားပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ၁၉၇၀နှစ်များတွင် Hangzhou ဒေသ၌ ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဟိုတယ်မှကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို စက်ဘီးတစ်စီးဖြင့် သူတို့မြို့လေးကို လိုက်လံပြသည့်အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်နိုင်ရုံမက ပြင်ပကမ္ဘာကြီကိုလည်း မြင်လာစေသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ နှစ်ကြိမ်ကျရှုံးပြီးသည့်နောက် ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတက်ပြီး ၁၉၈၈တွင် အင်္ဂလိပ်ဆရာဘ၀ ရောက်ခဲ့သည်။ Hangzhou Dianzi University တွင်ဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကြီး ၁၉၉၅တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုအတွက် အင်္ဂလိပ်စကားပြန်အဖြစ် လိုက်သွားခွင့်ရခဲ့သည်။ ပထမဆုံး အင်တာနက်နှင့် စတင်ထိတွေ့ရသည်။ တရုပ်ပြည်အကြောင်း အွန်လိုင်းတွင် မရှိသလောက်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ တရုပ်ပြည်ပြန်ရောက်ပြီး Page 1
2. Alternate ◌နnergy- China ဒေါ်လာနှစ်ထောင် $2000 ချေးယူကာ တရုပ်အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည်၏ ပထမဆုံး အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မကြာမီ ပြိုင်ဖက် China Telecom နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပီကင်းမြို့တွင် တရုပ်အစိုးရအတွက် e-commerce ၀င်လုပ်ခဲ့သည်။ ကြီးပွားလာခြင်း သိပ်ကြာကြာ အစိုးရအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ ၁၉၉၉တွင် ဒေါ်လာ ခြောက်သောင်း ($60,000) ဖြင့် အလီဘာဘာ Alibaba.com အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်စီးပွားလုပ်ငန်းများ အချင်းချင်း ကုန်သွယ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ပြည်ပမှ သွင်းကုန်၊ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ပထမတွင် သူ့တိုက်ခန်းကလေးမှ လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်မှာ Softbank ကဲ့သို့သော အကြီးစားရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများကြောင့် လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရှယ်ယာ ၄၀% ကို ရာဟူး Yahoo သို့ $1 billion ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း Dotcom ဒေါ့ကွန်းများ အောင်မြင်စဉ်က Ma သည် အလျှင်အမြန် တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည်ထုတ်ကုန်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၀၂ နှစ်ကုန်တွင် အမြက်အစွန်များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၀က်ဆိုဒ်သည် အလွန်တိုးတက်လာပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၅၆သန်းရှိလာသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၄၀ကျော်မှ အသုံးပြုလာကြသည်။ အလီဘာဘာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ တခြား လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်း ၀က်ဆိုဒ်ဖြစ်သော Taobao ကို ၂၀၀၃တွင် စတင်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာအများဆုံးကြည့်ခံရခြင်း တစ်နေ့ကို သန်းပေါင်း၅၀ 50 million unit visitors per day ဖြစ်လာသည်။ ပစ္စည်းပေါင်း သန်း၈၀၀ကျော် အရောင်းစာရင်း တင်ထားသည်။ Taobao သည် အများပိုင်မဟုတ်သည့် အင်တာနက်ဆိုဒ်များတွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဟု အချို့ကဆိုသည်။ Yahoo နှင့်ခွဲခွာခြင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသော အလီဘာဘာ သည် Yahoo သို့ရောင်းထားသော ၄၀% ရှယ်ယာများကို ပြန်ဝယ်ဖို့ ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Yahoo အကြီးအကဲ Jerry Yang ရာထူးဖယ်ပေးလိုက်ပြီးသည့်နောက် Alibaba နှင့် Yahoo တို့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာသည်။ အလီဘာဘာ မှ ရာဟူးကို $7.1 billion ငွေသား(သိုမဟုတ်)စတော့ဖြင့် ရာဟူးရှယ်ယာတစ်ဝက်အတွက် ပေးမယ်ဟု ကြေငြာသည်။ လက်ကျန်ကို အလီဘာဘာအုပ်စု အများပိုင်လုပ်ပြီးမှ ၀ယ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ရယ်စရာ Jack Ma ကပြောပြသည်။ တစ်နေ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင် သူထိုင်ပြီး၊ အလီဘာဘာ Page 2
3. Alternate ◌နnergy- China ဆိုသည့်နာမည် အလွန်ကောင်းကြောင်းစဉ်းစားနေသည်။ ကော်ဖီဆိုင် စားပွဲထိုးမိန်းကလေး ရောက်လာ၍ အလီဘာဘာဆိုတာ သိသလား ဟု မေးကြည့်သည်။ စားပွဲထိုးက သိပါသည် ..ဖြေသည်။ ဒါဆို အလီဘာဘာဆိုတာ ဘာလဲ ..ဟု ထပ်မေးသောအခါ အလီဘာဘာနဲ့ခိုးသားငါးရာ ဟုဖြေပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ လူတွေအားလုံး အလီဘာဘာဆိုတာ သိကြသည်။ တခြားနာမည် Alimama ကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ Jack Ma ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ကန်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ သန်းဖြစ်သည်။ Hurn Rich 2011 တွင် အဆင့် ၁၀၉ ဖြစ်သည်။ Note ၂၀၁၃ မြန်မာ အလီဘာဘာဝက်ဆိုဒ်တွင် လိုချင်တာအားလုံးရှိကြောင်း၊ ယခင်က ကျွနိုပ်သိခဲ့သော်လည်း မြန်မာပြည်မှ မြန်မာများနှင့် အလှမ်းဝေးတယ် ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ယခု 2013 import/export (ပစ္စည်းအမျိုး၅၀၀ကျော်၊ ကျောက်စိမ်း၊ ကျွန်းသစ်မပါ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ) ကို တရုပ်ပြည်အနှစ်၂၀ကျော်က ပုံစံ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။ လိုင်စင်မလို၊ ကုမ္မဏီမလို ကုန်တိန်နာ၊ သွင်း၊ထုတ်နိုင်ပြီ ဆိုပါသည်။ လူတွေမလုပ်တတ်ဘူး၊ မလုပ်ရဲ ဖြစ်နေပါသည်။ import/export လုပ်ငန်းများကို ပိုက်ဆံ၊အာဏာရှိသူများသာ ချုပ်ကိုင်ထားသည်မှာ ကြာပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် ပိုနေတဲ့ကုန် (လယ်ယာထွက်ကုန်များ)၊ ကွန်တိန်နာတစ်ခုစာလောက် လူငယ်များစုပေါင်းပြီး သွင်း၊ထုတ် လုပ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ မကြာခင်အတွင်း မကြာခင် လူငယ်သူဌေးများသည် ခရိုနီများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တော့မှာဖြစ်သည်။ လောလောဆယ် Alibaba.com ကိုနှိပ်ကြည့်ပါ။ အားလပ်ချိန် Leisure Time တွင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားသည့် ပစ္စည်းများကို Type လုပ်ပြီး Search လုပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ .. Solar Power 500kw, Generator 500w, laptop, iPhone, myanmar rice, myanmar teak, myanmar jade, used japan car ..etc. ထူးခြားတဲ့အမြင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ ၂၀၁၄ မြန်မာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒများ အထူးသဖြင့် import/export တွေမှာ ဥပဒေပိုပြီးစိုးမိုးလာပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာ သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်ကို ငွေ-အာဏာရှိသူများသာ ချယ်လှယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ DHL China-Yangon, Singapore-Yangon ပို့ခြင်းကို မြန်မာပြည် အခွန်ကောက်ဌာနရဲ့ ဆောင်ရွက်ခ (လာဘ်စားမှု) ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကြိုးနီစနစ် ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်လှပါတယ်။ သွင်းကုန် စနစ်ကိုလည်း ငွေ- အာဏာရှိသူများ(ခရိုနီ) S.O Special Order ဆိုပြီး ကုန်တိန်နာမြောက်များစွာ ဥပမာ - လမ်းခင်းတဲ့ကတ္တရာ လိုမျိုး အစိုးရပရိုဂျတ်၊ ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်စာနဲ့ ဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရောထည့်နိုင်ရင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာ ရှာဖွေဖို့အချိန်မရပါဘူး။ S.O ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများအားလုံး မနှောင့်နှေးရအောင် (ပြသနာဖြစ်ရင်၊ မိမိထိခိုက်နိုင်လို့) ကြိုးစားလုပ်ရပါတယ်။ ဒီလို S.O နဲ့တင်သွင်းလာတာတောင် ကြားပေါက်ကုန်ပစ္စည်းမှန်းသိရင် နာမည်ကြီးတဲ့ မိုဘိုင်းအဖွဲ့ mobile team လာစစ်မှာမို့ ဆိုပြီး၊ နှောင့်နှေးလိုက်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် လာဘ်ပေးဖို့ ဆိပ်ကမ်းဌာနများက ညင်သာစွာ ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးတဲ့ ကွန်တိန်နာ၊ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းစနစ်ကြောင့် တန်ဖိုးကြီး၊ လေးလံတဲ့ပစ္စည်းများကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က တရားဝင်တင်သွင်းပါတယ်။ ဥပမာ - တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကားပါမစ်နဲ့တင်သွင်းတဲ့ ဒေါ်လာသိန်းချီတန်၊ ဇိမ်ခံကားများ၊ အရက်၊ဆေးလိပ်၊လူသုံးကုန်၊စားကုန် အကောင်းစားပစ္စည်းများ.. ကို ဆိပ်ကမ်းကွန်တိန်နာနဲ့မပို့တော့ပဲ၊ နယ်စပ်က ပို့ပါတယ်။ တန်ဖိုးသိပ်ကြီးတဲ့ စိန်ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာများကိုတော့ လေဆိပ်မှာပဲ X-ray scan မလုပ်ပဲ၊ (ဘာဘ်ပေးနည်းနဲ့) တင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ မှာတော့ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ဖို့ ခက်သွားပါတယ်။ အခွန်ဝန်ထမ်းများကို လစာ၊ဆုကြေး ပေးတဲ့နည်းလမ်းကို သုံးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၄မှာ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းမှာ ကွန်တိန်နာများ လျှင်မြန်စွာ စစ်ဆေး၊ တင်သွင်းနိုင်တဲ့ သွင်းကုန် အေးဂျင့်များစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီ Page 3
4. Alternate ◌နnergy- China ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သို့ စင်ကာပူမှ သွင်း/ထုတ်ကုန်နှင့် ငွေပေး/ယူ လုပ်နည်း၊ ဗဟုသုတအနည်းငယ် မြန်မာပြည်ဟာ နိုင်ငံတကာလောကမှာ ယုံကြည်မှုမရှိဆုံး နိုင်ငံအဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေ ယုံကြည်တာတော့ မြန်မာပြည်က ခရိုနီကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ (ခရိုနီ) များဟာ လုပ်စားလာတာ ၂၀နှစ်လောက် ရှိပြီဆိုတော့ အရာရာ တစ်ပန်းသာနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများမှာလည်း နာမည်ရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခရိုနီ မဟုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီများစွာ သွင်း/ပို့ လုပ်ငန်းလုပ်နေကြပါပြီ။ သမရိုးကျ L.C Letter of Credit ပစ္စည်းပို့ခြင်း ကုမ္ပဏီများ ပစ္စည်းရောင်း/ဝယ်၊ သွင်/ပို့ကုန်လုပ်ငန်းကို ပုံမှန်အတိုင်း၊ L.C လုပ်ပြီး တင်ပို့ကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို ကြိုပေးစရာမလိုပဲ၊ တဖက်နိုင်ငံနဲ့ဒီဖက်နိုင်ငံ ၂ခု ဘဏ်များက အာမခံပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးရင်လဲ အာမခံထားတဲ့ ငွေပမာဏ၊ လျော်ကြေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ အစိုးရနဲ့ခရိုနီ ကုမ္ပဏီကြီးများပဲ ဒီစနစ်ကို သုံးကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ပစ္စည်းတင်ပို့လိုသူတွေအတွက် လောလောဆယ် ဒီနည်းက လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ ဘဏ်ကို အာမခံအဖြစ် ထားတဲ့အတွက် အရာရာမှာ ဘဏ်ကပဲ အမြတ်ရပါတယ်။ L.C စနစ်ကို မရေးတော့ပါဘူး။မြန်မာပြည်အတွက် ဒေါ်လာ ထောင်၊ သောင်း၊ သိန်းဂဏန်းအထိ သွင်း/ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်လဲ L.C စနစ် အသုံးလဲမကျပါဘူး။ အသေးစား သွင်း/ပို့ကုန် လုပ်ငန်းကို .. တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေ၊ ပစ္စည်းပို့စနစ်ကိုပဲ စတင်လုပ်ဆောင်မဲ့ မြန်မာများအတွက် အနည်းငယ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များကို ရေးရရင် ၁။ မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပို့ ဖို့ ပစ္စည်းဝယ်မယဆိုရင်၊ တန်ဖိုးကြီးတန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီး Down Payment 80% လောက်ထိ ယူပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်း (သို့မဟုတ်) အခွန်ဌာနမှာ ကိုကျော်ပြီး၊ ပစ္စည်းထုတ်သွားပြီးမှ လက်ကျန်ငွေကို ပေးရပါတယ်။ ၂။ - ငွေပို့ပေးခြင်းကို TT (သို့မဟုတ်) Bank Transfer နဲ့ပေးရင် စင်ကာပူကုမ္မဏီဆို 3-7 days လောက်ကြာပါတယ်။ - မြန်ချင်ရင် Western Union, Money Gram တို့နဲ့ပို့ရင် ပို့ခလည်း သက်သာပါတယ်။ နာရီပိုင်းနဲ့ ရောက်ပါတယ်။ Company A/C ထဲ ထည့်မပေးပါ။ ဟိုဘက်မှာ လူကိုယ်တိုင် လာထုတ်ရင် ပိုမြန်ပါတယ်။ - ပိုလွယ်၊ ပိုမြန်ပြီး၊ ပို့ခ အသက်သာဆုံးကတော့ Remittance Service (ငွေလွှဲနည်းပါပဲ)။ ကိုယ့်ငွေ မြန်မြန်ပေးလိုက်မှ သူတို့ပစ္စည်းကို Shipment စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်ကို ငွေပေး/ယူ လုပ်တဲ့ ဆိုင်တွေ နေရာတကာမှာ ရှိပါတယ်။ - ငွေလွှဲနည်းက အကောင်းဆုံး (ပေါ့ချောင်ကောင်း) ဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ချမှ လွှဲပါ။ TT, Bank Transfer with US$ account လုပ်ရင် တရုပ်ပြည်ဖက်က မလိမ်ရဲတော့ပါဘူး။ ၃။ Payment အခြားနိုင်ငံများကဆိုရင်တော့ ကန်ဒေါ်လာနဲ့ပေးတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ တရုပ်ပြည်ကို ပေးရမယ်ဆိုရင် အဲဒီတရုပ်ကုမ္ပဏီမှာ US dollar A/C ကို ပို့ပေးရပါတယ်။7to 10 days လောက် ကြာပါတယ်။ အမေရိကန် NY City ရဲ့ approval ကိုစောင့်ရသေးတယ် ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကုမ္ပဏီဆို တိုက်ရိုက်လွှဲရင် ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ Page 4
5. Alternate ◌နnergy- China City ရဲ့ approval ကိုစောင့်ရသေးတယ် ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကုမ္ပဏီဆို တိုက်ရိုက်လွှဲရင် ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ US$ တရုပ်ကုမ္ပဏီဆီ ရောက်မှ သူတို့က ပစ္စည်းပို့ပေးမှာမို့ ငွေရောက်သွားဖို့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုပ်နိုင်ငံကို US$ နဲ့ပို့မဲ့အစား တရုပ်ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ငွေပေးချေတာ ပိုမြန်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ တရုပ်ငွေလွဲဆိုင်တွေက တရုပ်ကုမ္ပဏီ Chinese Yuan Bank A/C ကို လွှဲပေးလိုက်ရင် နေ့ချင်းရောက်ပါတယ်။ ငွေရတာနဲ့ တရုပ်ပြည်က Shipment စတင်ပါတယ်။ ၄။ Shipment မြန်မာပြည်ကို ရောက်မဲ့ ETA arrival date သင်္ဘော (သို့မဟုတ်) လေယာဉ် ကုမ္ပဏီပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်က ပို့ကုန်ကို ကုန်းကြောင်းနဲ့ ရွှေလီ ETA လုပ်ရင်လဲ ရပါတယ်။ ၅။ Tax System at Myanmar Custom ကုန်းကြောင်းနဲ့ ရွှေလီ ETA နဲ့လုပ်ရင်၊ ရွှေလီကနေ ရန်ကုန်ကို သယ်ပေးတဲ့ အေးဂျင့်တွေကို သွားယူခိုင်းရပါတယ်။ သူတို့က Tax ကိစ္စတွေ မြန်မာ့အခွန်ဦးစီးဌာနနဲ့ ဥပဒေအတိုင်း မြန်မြန်မလုပ်ပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပစ္စည်းထုတ်ယူဖို့တော့ အေးဂျင်နဲ့ထုတ်ခိုင်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ၆။ Quality and Reliability of Materials ကိုယ်ဝယ်တဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေး၊ စိတ်ချမှန်ကန်မှုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ သိပ်မယုံရင် ကိုယ်တိုင် တရုပ်ပြည်ကို သွားဝယ်၊ Shipment ကိုလဲ ကိုယ့်ဖာသာလုပ်ပြီး၊ ပြန်လာခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါ။ လုပ်နေကျ ရှိသွားရင် လုပ်တတ်သွားပါတယ်။ ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးမှန်လည်း ရှာတတ်လာပါတယ်။ မှတ်ချက်။ တရားဝင် ပို့ဖို့ဆိုရင် စာတိုက်က ပို့သလို ပို့လိုက်လို့ မရပါဘူး။ - မြန်မာပြည်က အေးဂျင့်ကို Invoice, Packing List တွေ အရင်ပို့ရပါမယ်။ မြန်မာပြည်က Invoice & Packing List တွေကို မြန်မာဥပဒဘောင်နဲ့ညီအောင် ပြန်ပြင်ခိုင်းရင် ပြင်ပေးရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က အေးဂျင်က အိုကေ၊ ပို့တော့ ဆိုမှ Shipment ပို့လို့ရပါတယ်။ ပစ္စည်းနဲ့အတူ Packing List ထည့်ပေးရပါတယ်။ ပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုလည်း နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဈေးနှုန်းလျှော့၊ ဘောင်ဝင်အောင် လုပ်ရပါတယ်။ - ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ပစ္စည်းပို့ရင် အေးဂျင့်နဲ့အပ်ပါ။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ အေးဂျင့်ပဲ သုံးရပါတယ်။ - အကောင်းဆုံး Shipment ကတော့ တရုပ်ပြည်ကဆိုရင်၊ ရွှေလီ ကုန်းကြောင်းပို့ပေးပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံကလည်း နယ်ခြားဂိတ်တွေကတဆင့် ပို့ပေးတာ မြန်၊ကောင်း၊သက်သာ ပါတယ်။ သင်္ဘောနဲ့ ပို့ခြင်းက လယ်ယာ၊ စက်မှု ပစ္စည်းကြီးတွေကို ပို့ပါတယ်။ - ကုန်ပစ္စည်းအများစုဟာ China --> Singapore --> Myanmar နည်းနဲ့ ပို့ပါတယ်။ စင်ကာပူအဝင်မှာ GST% အခွန်မကောက်အောင် လုပ်ဖို့ အေးဂျင့်က လုပ်နည်းသိပါတယ်။ တရုပ်ပြည်က စင်ကာပူကို ပို့ပေးပြီးရင် GST ကောက်ပြီးသားကို မြန်မာပြည်ထပ်ပို့ရင် GST Claim လုပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ - အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိလို့ မြန်မာပြည်ပစ္စည်းပို့ရင် မြန်မာပြည်ဖက်က အေးဂျင့်နဲ့ သေချာပေးမြန်း၊ သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဒီဘက်က လုပ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာပြည် သွင်း/ထုတ် ကုန်တွေ ဖွင့်ပေးတာ ၂နှစ်ကျော်ပဲ ရှိသေးတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ကို ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းက ဈေးကြီး၊ ခက်ခဲ၊ ကြန့်ကြာတတ်ပါတယ်။ နောက် ၃နှစ်လောက်ဆို နိုင်ငံတကာအဆင့် ရောက်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ - အမြန်ပို့ချင်တဲ့၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ မိုဘိုင်း၊ကွန်ပြူတာ စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ပင်နီစူလာပလာစာက သပြေနု၊ ရဲရင့် စတဲ့ဆိုင်များက ပိုခဈေးကြီးကြီးနဲ့ ပို့ပေးပါတယ်။ အခွန်ကိစ္စတွေ သူတို့ပဲ ရှင်းပါတယ်။ - အရေးကြီးဆုံးကတော့ ငွေလက်ခံရရှိခြင်း နဲ့ ပစ္စည်းလက်ခံရရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေနဲ့ပစ္စည်းပို့တာက အလွန်လွယ်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိဖို့ကတော့ ကိုယ်ကမသမာလုပ်ရင်၊ အတုံ့အလှည့် ကိုယ်ပြန်ခံရတတ်ပါတယ်။ Page 5
6. Alternate ◌နnergy- China အလွန်လွယ်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိဖို့ကတော့ ကိုယ်ကမသမာလုပ်ရင်၊ အတုံ့အလှည့် ကိုယ်ပြန်ခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မြန်မာများရဲ့ စာရိတ္တသိက္ခာကို ပြန်ဆည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ငွေ/ပစ္စည်း ပိုခက အလွန်ဈေးချိုပါတယ်။ ဒေါ်လာ၂၀၀၀ ပို့ခ ဒေါ်လ၂၀လောက်ပဲယူသလို၊ ဒေါ်လာ၂၀၀၀တန် ပစ္စည်းပို့ခလည်း ဒေါ်လာ၅၀ ထက်မကုန်ပါဘူး။ ပစ္စည်းအလေချိန်၊ ထုထည်ပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကွန်တိန်နာ အသေးတလုံး စင်ကာပူ၊မြန်မာပြည် ပို့ခက ဒေါ်လ၅၀၀တောင် မကုန်ပေမဲ့၊ မြန်မာပြည်ရောက်ရင် မလိုလားအပ်တဲ့ အကျင့်ပျက်မှုတွေကြောင့် သင်္ဘောကြံ့ကြာတတ်လို့ ပို့ခဈေးကြီးနေရပါတယ်။ - ငွေနဲ့ပစ္စည်း မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်နဲ့တစ်ပါတည်း သယ်သွားလိုသူများ အထူးသတိပြုဖို့ကတော့ ဒေါ်လာတစ်သောင်းခွဲ အထက်၊ မိသွားရင် မလိုလားအပ်ပဲ ပြသနာရှုပ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းများလည်း မိသွားရင် ရှုပ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဖက်က အေးဂျင့်တွေကို အမှန်အတိုင်းပြောပြီး ပစ္စည်း၊ ငွေ ဒေါ်လာများ သယ်သွားရင် လေဆိပ် X-ray စက်နဲ့မိသွားပြီး ကြံကြာမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငွေ၊ ပစ္စည်း အများကြီးသယ်သွားလို့ မဖမ်းပါဘူး။ သိမ်းဆည်းခံရပြီး၊ အချိန်ကြံ့ကြာနေမှာပဲ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်လာသိန်း၊ သန်း ကိုင်တွယ်၊ သွားလာ၊ ပစ္စည်းသွင်း/ထုတ် နေသူများ ပြသနာမဖြစ်ပေမဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ငွေများ နဲနဲပဲ သယ်တဲ့ ခရီးသည်များ လေဆိပ်မှာ ကြံကြာတတ်ပါတယ်။ ကိစ္စတော့မရှိတော့ပါဘူး။ ပစ္စည်းဆိုရင် အခွန်ဆောင်၊ ငွေဆိုရင် Declear လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ ။ မကြာခင်မှာပဲ အကျင့်ပျက်မှုများ ကျဆုံးသွားပြီး၊ မြန်မာလူငယ်များရဲ့ import/export small&medium business လုပ်ငန်းအသေး၊ အလတ်စားများ အောင်မြင့်အဆင်ပြေလာမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ နိဂုံးအနေနဲ့ .. တစ်ခါတလေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခက်သလိုဖြစ်ပေမဲ့၊ လုပ်နေကျဖြစ်သွားရင် လွယ်ပါတယ်။ အခု သွင်/ထုတ် ကိုယ့်ဖာသာ လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်၊ နောင်ဆိုရင် တရုပ်မြန်မာ ကုန်သွယ်မှု စနစ်တကျဖြစ်လာတဲ့အခါ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဖြစ်လာပါမယ်။ လိမ်လည်ခံရမှုတွေ နည်းသွားပါမယ်။ စင်ကာပူမှာနေထိုင်သူ မြန်မာများ စင်ကာပူကနေ မြန်မာပြည်ကို ကုန်ပစ္စည်း သွင်း/ထုတ်၊ ငွေပေး/ယူ လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် များစွာ ပေါ်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှ သူကြွယ်များအချို့ (မြန်မာဘာသာပြန်) http://mingalaronline.biz/mdg/4.electrical/alibaba.and.bamar1.htm Page 6
7. Alternate ◌နnergy- China အလီဘာဘာမြန်မာများ Alibaba.com နှင့် နမူနာယူစရာ Business in China Alternate Energy Chinese Tycoons (နေရောင်ခြည်နှင့်လေရဟတ်) အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားအစိုးရ ပြဌာန်းသော Green Energy ပေါ်လစီကို အကောင်းဆုံးအသုံးချသည့်၊ တရုပ်ပြည်ထုတ်လုပ်သော နေရောင်ခြည်၊ လေရဟတ် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းရှင်၅ခုအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်တွင် သူဌေးကြီးများ ၁၀၅ဦးအကြောင်း တစ်မျက်နှာစီ ရေးထားပါသည်။ မော်တော်ကား Automotive (၆)ဦး၊ အ၀တ်အထည်လုပ်ငန်း Clothing (၁၃)ဦး၊ ကွန်ပြူတာ၊အီလက်ထရွန်းနစ် (၆)ဦး၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်း (၈)ဦး၊ အင်တာနက်လုပ်ငန်း (၁၄)ဦး၊ ရင်းနှီးမြှတ်နှံလုပ်ငန်း (၅)ဦး၊ သယံဇာတထုတ်လုပ်ငန်း (၈)ဦး၊ အိမ်မြေ၊တိုက်တာလုပ်ငန်း (၁၁)ဦး၊ ကုန်စုံဆိုင်လုပ်ငန် (၄)ဦး၊ လူသုံးကုန်လုပ်ငန်း (၄)ဦး၊ အထွေထွေလုပ်ငန်း (၁၆)ဦး. .. တို့အကြောင်း ဒေါင်းလုပ်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ Page 1
8. Alternate ◌နnergy- China ဘ၀အစပြုခြင်း Shandong မှာ ၁၉၅၈ခုနှစ်မွေးခဲ့သည်။ သူ၏ တရုပ်ပြည်လုပ်ငန်းရှင်များတွင် စံပြုထိုက်သူဖြစ်သည်။ တရုပ်ပြည် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအပြီး ကံကောင်းစွာဖြင့် တက္ကသိုလ်ပညာပြီးနောက်၊ အစိုးရ ဘူမိဗေဒစွမ်းအားဌာနတွင် oil equipment engineer အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲမှုကြီး အသက်၁၉နှစ်အရွယ်မှာ သူ့ ရဲ့ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခပြောတာ ကြားခဲ့သည်။ အနှစ်၅၀ကြာရင် ကမ္ဘာ့ရေနံများကုန်ခန်းသွားမယ် ဟု ဆိုသည်။ ထိုအတွေးခေါ်မှု အမြဲစိတ်ထဲရှိနေပြီး နေရောင်ခြည်နဲ့ရေအပူပေးစက်ကို ညနေပိုင်းအချိန်များတွင် တီထွင်ဒီဇိုင်းလုပ်လေ့ရှိသည်။ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးများကို မိမိလုပ်ထားသည့် စက်ကလေးများ လက်ဆောင်ပေးတတ်သည်။ သူ့စက်ရုံအုပ်ချုပ်သူက ဒီဇိုင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်မှုနဲ့ စီးပွားဖြစ်လုပ်လို့ရနိုင်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၅မှာ အစိုးရအလုပ်ကထွက်ပြီး Himin Solar ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း Himin ကုမ္ပဏီသည် အခုအခါ တရုပ်ပြည် အကြီးဆုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေအပူပေးစက်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ တစ်နှစ်တွင် အလုံးရေ တစ်သန်း ထုတ်လုပ်သည်။ သူ၏မြို့ Dezhou သည် တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ နေရောင်ခြည်စက်မှုလုပ်ငန်း ဗဟိုအချက်ချာဒေသ ဖြစ်လာသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဌာနချုပ် (Sun-Moon Mansion) ဆိုလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေရောင်ခြည်းစွမ်းအင် အဓိကသုံးစွဲနေသည့် အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။ ထိုဌာနချုပ် ဂေါက်သီးကစားကွင်းတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ကားအငယ်လေးများကို တွေ့နိုင်သည်။ Page 2
9. Alternate ◌နnergy- China နိုင်ငံရေးနယ်မြေ ၁၀ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရက် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးလောကထဲကို အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Law on Renewable Energy ဥပဒေကို ရေးဆွဲအတည်ပြုအောင် ၂၀၀၆မှာ ဦးဆောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြီး လူမှုပြသနာများကို ဖြေရှင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှု Motion ကိုအခြေခံသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအားသုံး အိမ်သာများကို လယ်သမား သန်းပေါင်း၁၀၀အတွက် သုံးပေးရန် အဆိုပြုထားသည်။ လယ်သမားများ အလုပ်ခွင်တွင် အိမ်သာမသုံးကြပါ။ ၀ါသနာ ဘောလုံးကန်ပါသည်။ Dezhou League ဘောလုံးအသင်းမ အသက်ကြီးဆုံးဘော်လုံးသမားဖြစ်သည်။ ရှေတန်း ဂိုးသွင်းတိုက်စစ်မှုး ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု - ကန်ဒေါ်လာ ၃၈၀သန်း၊ Rank 763 on Huran Rich List 2011. ဘ၀အစပြုခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းရှင် ၁၉၆၃ တရုပ်ပြည်မှာမွေးဖွားခသည်။ သူအရပ်ဒေသတွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့် သေကြေမှုအကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့အချိန် ချို့တဲ့လှတဲ့ မိဘ၂ပါးဟာ ကလေးအကြီး (အကိုဖြစ်သူ) ကို ဆက်လက်ကျွေးမွေးနိုင်သော်လည်း အငယ်ဖြစ်သူ Shi Zhengrong ကို တခြားမိသားစုတစ်ခုဆီ ပေးပစ်ခဲ့ရသည်။ Page 3
10. Alternate ◌နnergy- China ပြောင်လဲမှုကြီး အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်၊ သြစတြေးလျှားနိုင်ငံ ပညာချွန်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တွင် ဆိုလာဆဲလ်ဖခင် ဟု ဆုတဆိပ်များရရှိသော ပါမောက္ခ Martin Green ၏ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် လေ့လာသင်ကြား၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည်။ မူပိုင်ခွင့် Patent ၁၀ခု ရရှိခဲ့ချိန်မှာ၊ သူတို့ ဒေါ်လာသန်း၅၀တန် လုပ်ငန်းကို Pacific Solar Power ကုမ္ပဏီမှ ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၁တွင် သြစတြေးလျှားတွင် ၁၀နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့သူ Shi တရုပ်ပြည်ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တရုပ်အစိုးရ၏ ထောက်ခံမှုရန် တရုပ်စကား die to eat globefish အတိုင်း အသေအလဲ ကြိုးစားတော့သည်။ ရလဒ်မှာ ကောင်းပေသည်။ Wuxi အစိုးရမြူနီစပယ်က သူ၏ကုမ္ပဏီသစ် Suntech အား ကူညီရန် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကြီးပွားလာခြင်း ဆိုလာဆဲလ် (Solar Panel) ပစ္စည်းအမှာစာမှာ နှေးကွေးလှသည်။ ၂၀၀၂-၂၀၀၄ ကာလတွင် သူ၏လစာ ၂၅%သာ ရရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင်ပြည်ပ လနှင့်ချီခရီးထွက်ပြီး သူတို့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းအတွက် ဈေးကွက်ရှာရသည်။ ဈေးကွက်အပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီး ဂျာမဏီမှ အထူးအမှာစာများရရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀သို့ သူတို့ပစ္စည်းများ ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။ သူ့အကြောင်း ၂၀၀၆ ဇန္န၀ါရီတွင် Suntech Power အမေရိကန် NYSE စတော့ဈေးကွက်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ တခဏချင်းပင် Shi သည် တရုပ်ပြည်အချမ်းသာဆုံးလူ ဖြစ်လာသည်။ Suntech သည် ယခုအခါ ဆိုလာဆဲလ် နဲ့ မိုဂျူးများ ထုတ်လုပ်သူ ကုမ္ပဏီအကြီးဆုံးစာရင်းဝင် ဖြစ်လာသည်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား၏ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင် စီမံကိန်းကို အသုံးချပြီး အရီဇိုးနားပြည်နယ်တွင် ဆိုလာဆဲလ် စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီး၊ ၂၀၁၁တွင် ဖွင့်လစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် တကမ္ဘာလုံး ဆိုလာဆဲလ် ထုတ်လုပ်မှု အလွန်မြားပြားလွန်းမှုကြောင့် Suntech အဖို့ ယခင်ကလောက် မချောမွေ့တော့။ နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ဘတ်ဂျတ်ဖြက်တောက်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းများ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ပထမ၄လပိုင်းတွင် ၄၀% ဈေးကျသွားသည်။ တိုးတက်မှုမရှိတော့ (zero growth) ဖြစ်နေသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ ဥရောပဆိုလာဆဲလ် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ စုပေါင်းပြီး တရုပ်ထုတ်လုပ်သူများကို ကုန်ကျစရိတ်ထက် လျှော့ရောင်းသည့် ဥရောပ ၇၀%ဈေးကွက်လုယူသည်ဟု စွတ်စွဲခံထားရသည်။ တရားစွဲရော်ကြေးတောင်းရန်အထိ ပြောဆိုနေသည်။ လက်ရှိအခြေနေ ငွေကြေးဆုံးဆုံးမှု၊ လုပ်ငန်းကျဆင်းမှုများမှာ တရုပ်ပြည်မှာ ကြွယ်ဝချမ်းသာလှသော Shi အတွက် သိပ်ပူပင်နေပုံမရှိ။ သူကပြောသည်။ အမြတ်ရရှိဖို့ထက် လူသားများအတွက်အဖြေရှာဖို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ် ..ဟုဆိုသည်။ သူတို့အိမ်ရဲ့ ရေကူးကန်ကို သားဖြစ်သူက ဗိလတ်မြေသုံးပြီး ဖို့နေခြင်းကို.. ဖြုန်းတီးမှုပဲ..လို့ပြောသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု - ကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀၀သန်း၊ Rank 217 on Huran Rich List 2011. Page 4
11. Alternate ◌နnergy- China ဘ၀အစပြုခြင်း Gushi, Henan ပြည်နယ်မှ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၀နှစ်ခန့် စစ်မှုထမ်းပြီး ၁၉၉၃တွင် ကုမ္ပဏီထောင်သည်။ ၁၉၉၃တွင် Shongshan Ming Yang Electric လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း အဓိကထားခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲမှုကြီး ၂၀၀၅တွင် လေစွမ်းအင်တာဘိုင်ကြီးများ Wind Turbine ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီပြပွဲကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသို့ ၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားဒီဇိုင်းကိုသုံးပြီး ပြည်တွင်းတွင် Wind Turbine များထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏ လျှပ်စစ်ထိန်းသိမ်းမှုပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူလုပ်မည့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန် ယုံကြည်မှုရှိသည်။ သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များက သူတို့ကုမ္ပဏီအငယ်စားမှ Wind Turbine ကြီးများထုတ်လုပ်ရန် သဘောမတူကြ။ သို့သော် Zhang က လက်မလျှော့ပါ။ နောက်တစ်နှစ်တွင် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ Guangdong Ming Yang Wind Power Technology ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကြီးပွားလာခြင်း Zhang ပထမဆုံးအလုပ်မှာ တာဘိုင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာရယူရေးဖြစ်သည်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ Aerodyn ကုမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးပေါင်းပြီး ဒီဇိုင်းအသစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီမှာ Page 5
12. Alternate ◌နnergy- China သုတေသနလုပ်ငန်းများ Research & Development ကို လုပ်ဆောင်ပြီး၊ တရုပ်ကုမ္ပဏီက နမူနာစက် Prototype ထုတ်လုပ်ပြီး၊ တရုပ်ပြည်တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ သိပ်စိတ်မပါသော်လည်း တရုပ်ပညာရှင်များ အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ပြသမှုများဖြင့် ဂျာမန်များပါဝင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း ၂၀၀၇သြဂုတ်လတွင် Ming Yang ကုမ္ပဏီမှာ ပထမဆုံး လေမုန်တိုင်းအကြမ်းခံ 1.5 mW လေတာဘိုင်ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆင့်၁၀ရှိသော တိုင်းဖုန်းမုန်တိုင်းကြီး၂ခုကို ခံနိုင်ကြောင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးများမှ အမှာစာ ၇၂ခု (ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၉သန်း) ရရှိပြီး စာချုပ်ချု့ပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ Zhang သည် တာဘိုင်အငှားလုပ်ငန်းကိုလည်း တရုပ်ဘဏ်ကြီးတစ်ခု ICBC ဖြင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘဏ်က Ming Yang တာဘိုင်များကို ၀ယ်ယူပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၉တွင် Ming Yang ကုမ္ပဏီတစ်နှစ်ဝင်ငွေ၏ ၃၀% သည် တာဘိုင်ငှားရမ်းသည့် လုပ်ငန်းမှ ရရှိခဲ့သည်။ Ming Yang နည်းဗျူဟာမှာ ကမ်းလွန်ရေနံ တာဘိုင်များကို ဦးတည်ရန်ဖြစ်သည်။ ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ငန်း တာဘိုင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ ဂရစ်နည်းပညာများနှင့် ဆက်စပ်အကျိုးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းများအတွက် Wind Turbine ဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင်မှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀တွင် အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်တွင် ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၅၀ဖြင့် စာရင်းသွင်းပြီးဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု - ကန်ဒေါ်လာ ၃၆၅သန်း၊ Rank ??? on Huran Rich List 2011. Page 6
13. Alternate ◌နnergy- China ဘ၀အစပြုခြင်း Zhang Yue ၁၉၆၀မှာ Changsha ဒေသမှာ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကောလိပ်မှဝိဇ္ဖာဘွဲ့ရရှိပြီး နှစ်အနည်းငယ် ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပုံဆွဲခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ အိမ်ဒီဇိုင်း စသည့်စီပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရင်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် လေအေးစက်များ ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် Broad ကုမ္ပဏီကို ကန်ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်အသံထွက် ..ကြီးမားပြီးဈေးကြီးသည် ဟု..အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မန်ချုးရီးယားတွင် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရသော ညီဖြစ်သူက မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုမူပိုင်ခွင့်မှာ ဖိအားမရှိသောဘွိုင်လာ pressure-free boiler ထုတ်လုပ်ပြီး၊ စက်ရုံများသို့ ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ ကြီးပွားလာခြင်း ၁၉၉၂ တွင် လျှပ်စစ်မသုံးသည့် လေအေးစက်များ အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရောင်းချရန် ကုမ္ပဏီ ဦးစားပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က တရုပ်ပြည်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မလုံလောက်မှုပြသနာကြီးကြောင့် ဖြစ်သည်။ Broad နည်းပညာမှာ အခြားလေအေးစက်များနှင့်မတူ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ (သို့မဟုန်) အခြားလောင်စာဖြင့် အအေးပေးအရည် lithium bromide ကိုအပူပေးခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးသည်။ အငွေများ အရည်ဖြစ်လာသောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးစေသည်။ စွမ်းဆောင်မှု Efficiency မှာ လျှပ်စစ်သုံးခြင်းထက် ၂ဆခန့် ကောင်းသည်။ Broad ထုတ်လုပ်အားမှာ ၁၉၉၂တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၀.၃ သန်းမှ ၁၉၉၆တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၂၉၈သန်း အထိဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၇တွင် နှေးကွေးသွားသည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီမှာ ၁၉၉၆ ကတည်းက အကြွေးမရှိပါ။ ရှယ်ရာပိုင်ရှင်များက အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် တောင်းဆိုသော်လည်း Zhang က ငြင်းဆိုသည်။ ၂၀၁၂တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး မျှော်စင်ကို Changsha တွင် ၇လအတွင်း အပြီးဆောက်မည် ဟု သတင်းထွက်နေသည်။ သူ့အကြောင်း Zhang သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ၁၉၉၉-၂၀၀၁ အတွင်း စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ လက်ရှိ ကာဘွန်ထုတ်လုပ်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးမည့်အရေးကို သတိပေးခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးသည်။ ဥပမာ တရုပ်ပြည်၏ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယဉ်ပျံ ပိုင်ဆိုင် ခရီးသွားခဲ့သူအဖြစ် ကြော်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ထိုလေယာဉ်၃စီးကို ရောင်းချပြီး လူစီးလေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားခဲ့သည်။ သူ့ကုမ္ပဏီ ဌာနချုပ် Broad Town သည် Changsha တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ အဆောက်အဦမှာ ကုမ္ပဏီအမှုထမ်း ၁၀၀၀ကျော် အတွက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ငလျှင်ခံနိုင်ပြီး၊၊ စွမ်းအင်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၈၉၃ Bourneville တွင် George Cadbury က သူ့အမှုထမ်းများအတွက် စံနမူနာအဖြစ် ရွာတည်ထောင်ခြင်းကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူ့အလုပ်သမားများ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့ ဌာနချုပ်အဆောက်အဦများကို ပိရမစ်ပုံစံ၊ ရွိုင်ယယ်ပုံစံ၊ နန်းတော်ပုံစံများဖြင့် ဆောက်ပေးထားသည်။ Page 7
14. Alternate ◌နnergy- China ပိုင်ဆိုင်မှု - ကန်ဒေါ်လာ ၉၁၀သန်း၊ Rank 186 on Huran Rich List 2011. ဘ၀အစပြုခြင်း Zhu Gongshan ၁၉၅၈တွင် မွေးဖွားသည်။ လျှပ်စစ်အဓိက ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ သူ၏မြို့ Funing တွင် ၁၉၇၈ အချိန်က လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် တရုပ်ပြည် စီးပွားရေးဖွင့်ကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စတင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ စတင်ခဲ့သည်။ အစိုးရမှတ်ပုံတင်ထားသော GCL Group ကို ပြည်ပတိုင်းပြည်များသို့ ထွက်ခွာပြီး တရုပ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများ အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှုများရရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး Solar Thermal Power Plant ကို Taicang တွင် စတင်နိုင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဟောင်ကောင်မှ ပူးပေါင်း ရင်နှီးမြှတ်နှံသူမှာ Hong Kong Continental Mariner Investment ဖြစ်သည်။ အဓိက ပူးပေါင်းရင်းနှီးမြှတ်နှံသည့် တရုပ်ပြည်ကုမ္ပဏီမှာ Poly Group ဖြစ်သည်။ Poly Group သည် တရုပ်စစ်တပ်နှင့်နီးစပ်ပြီး တိန်ရှောင်ဖိန့်မိသားစုနဲ့လည်း နီးစပ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ အမည်မှာ GLC-Poly ဖြစ်သွားပြီး အာဏာပိုင်အသိုင်းဝိုင်းနှင့် နီးစပ်သွားတော့သည်။ နောက်ဆယ်နှစ်ကြာသောအခါ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ ၂၀ခု တည်ဆောက်ခဲ့ရာ၊ တရုပ်ပြည်၏ နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကြီး ၅ခု ဘာမျှဝင်မစွတ်ခဲ့ပါ။ ၂၀၀၇တွင် GLC-Poly သည် ဟောင်ကောင် Stock List အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျောက်မီးသွေးမီးရှို့စွမ်းအင်နှင့် ဘိုင်အိုမတ်စ် Biomass Generators အများစုကို အသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၆ တွင်၊ စီးပွားရေးကပ် ဖြစ်မည့်ပုံစံ ကာတွင် အနာဂါတ်၊ နေရောင်ခြည် Solar Energy အတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀၀သန်း ရင်းနှီးမြှတ်နှံခဲ့သည်။ PV photovoltaic industry အတွက် polysilicon များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ရင်းနှီးခဲ့သည်။ Suntech နှင့် Yingli ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ အခြေခံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံ အဖြစ် ဈေးကွက် Page 8
15. Alternate ◌နnergy- China လွမ်းမိုးရန်ဖြစ်သည်။ ခြေလှမ်းကျဲသည် သူ၏ တမဟုတ်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မှန်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးက Solar panels များ မြောက်များစွာလိုအပ်လာချိန်တွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သော polysilicon ထုတ်လုပ်မှုနည်းချိန် ဈေးနှုန်း $500 per Kilogram ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် Zhu က ထိုဈေးနှင့်မရောင်းပဲ တစ်ဝက်ဈေးဖြင့် စီးပွားမိတ်ဆွေကုမ္ပဏီများကို ၈နှစ် အရောင်းစာချုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ စီးပွားကပ်ဖြစ်လာစဉ်တွင် polysilicon များ $100 per kilo ဈေးကျသွားသည်။ သူ၏ ကန်ထရိုက်က ပြိုင်ဖက်များထက် အမြတ်များစွာ ရရှိစေခဲ့သည်။ ၂၀၀၈တွင် တရုပ်ပြည်မှ ပြည်ပတင်ပို့သည့် polysilicon တစ်ဝက် သူတို့ ကုမ္ပဏီမှတင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉တွင် GCL-Poly သည် နေရောင်ခြည်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ solar power plants ဆောက်လုပ်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်လာသည်။ တရုပ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု CIC မှ ကန်ဒေါ်လာ ၇၁၀သန်း ထည့်ဝင်လိုက်သည်။ ၂၀% ရှယ်ယာဖြစ်သည်။ GLC-Poly မှထုတ်လုပ်သော silicon wafer လျှပ်စစ်ဓါတ်အား 3500 mW ဖြစ်လာသည်။ တကမ္ဘာလုံး solar silicon wafer ထုတ်လုပ်မှု၏ ၃၀% ဈေးကွက်ကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာ - ၂၀၁၁တွင် 1000 mW နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံများ အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းတွင်ဆောက်လုပ်ရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ GLC-Poly သည် ၂၀၁၁ နှစ်ဝက်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၅၅၅သန်း အမြတ်ထွက်ခဲ့သည်။ polysilicon တန်ချိန် ၆၅၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် စီမံကိန်းချထားသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု - ကန်ဒေါ်လာ ၂၁၀၀သန်း၊ 2.1 billion usd, Rank 30 on Forbes Rich List 2011. ကောက်နုတ်ချက်။ ထိုစာအုပ်တွင် Chinese Tycoon 105 ဦးအကြောင်းပါသည်။ တရုပ်ပြည်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအသစ်ပြောင်းသွားတိုင်း တရုပ်ပြည်မှ သူဌေးကြီးများ ပြိုလဲပျက်စီး၊ ဒုက္ခရောက်ကြသည်။ တရုပ်သူဌေးကြီးများကျိန်စာသင့်ခြင်း ပြုစုချက်တွင်၂၀၀၃ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ခုနှစ် ၈နှစ်ကာလအတွင် တရုပ်ပြည်မှ သန်းရာနှင်ချီ ချမ်းသာသော သူကြွယ်သူဌေး ၇၂ဦးအကြောင်း သုတေသနပြုမှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သူဌေးကြီးများ ဇတ်သိမ်းအကြောင်း ဖော်ပြချက်၌ ၁၅ဦး အသတ်ခံရသည်။ ၁၇ဦးက မိမိကိုယ်ကို သတ်သေကြသည်။ ငွေချမ်းသာမှုက လူကို စိတ်ချမ်းသာမှုမပေးပါ။ ၇ဦးက သင်္ကာမကင်းဘွယ်သေဆုံးရသည်။ ၁၄ဦးက ရာဇ၀တ်မှုကြောင့် အဖမ်းခံရကာ သေဒဏ်ပေးခံလိုက်ရသည်။ ၁၉ဦး ရောဂါဆိုးနှင့်သေကြသည်။ အကြောင်းမှာ ကြွယ်ဝ၍ သောက်စား၊ မူးယစ်ဆေးသုံး၊ မတရားမေထုန်လိုက်စားပြီး သေကြရသည်။ ၇၂ဦးစလုံး ဇတ်သိမ်းမလှကြပါ။ Liu Han—a Sichuan mining billionaire ကဋေကြွယ်သူဌေးကြီး March-2013 မှာပျောက်ဆုံးသွားသည်။ Xu Ming,areal estate billionaire အိမ်မြေလုပ်ငန်းရှင်ဘီလျှံနာလည်း April 2013 မှာ ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ သူ့တို့အားကိုးတဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာရှိသူ အငြိမ်းစားပေးခံမှုနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ တရုပ်ပြည်မှာ သိပ်မထူးဆန်းပါ။ သူဌေးကြီးဘ၀ နှစ်တိုတိုအတွင်းဖြစ်လာသလဲ သုံသပ်လျှင် ခြစားမှုမျိုးစုံကြောင့်ဟု လို့ပြောနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လက်ဆုတ်လက်ကိုင်မပြနိုင်သောအခါ သူဌေးကြီးများကို မွဲသွားအောင် တရုပ်ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများက လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၊ တရုပ်နိုင်ငံဝင်ငွေပိုမိုရရှိလာပါသည်။ Page 9
16. Alternate ◌နnergy- China သေဒဏ်ပေးခံရမည်ကိုပင် မကြောက်သော သူဌေးကြီးများလောဘမှာ အံ့သြစရာဖြစ်သည်။ ဘာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါစေ လူသားအရင်းအမြစ် နံပါတ်(၁) ဟု သိကြသော်လည်း လက်တွေ့ တွင်၊ တီထွင်ကြံဆနိုင်သူများအဖို့ ပါဝါကြီးသူများ၏ ပိတ်ဆို့မှုရှိပါသည်။၊ မြန်မာပြည်ခေါင်းဆောင်များ လူသားအရင်းမြစ်ကောင်း တရုပ်ပြည်မှအနောက်နိုင်ငံထိ စီးပွားအင်ပါယာချဲ့ထွင်ပေးသော အတုယူဖွယ်လူသား၅ဦးအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ MDG series ဇော်အောင်(မုံရွာ) 100 Chinese Tycoons Book - Download Link: http://mingalaronline.biz/chinese100.pdf China တရုပ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် အောက်ခြေလူတန်းစား များစွာတိုးတက်ကြီးပွားလာခဲ့သည်။ အင်တာနက်၊အိုင်တီပညာနှင့် ကြီးပွားလာသူ ၃ဦး၊ စားသောက်ဆိုင်ရှင် ၂ဦးးအကြောင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံ လူတန်းစားဘ၀မှ ကြီးပွားလာသူများ ၁၀၅ဦးအကြောင်း ရေးထားသည့် စာအုပ်မှ ဖြစ်သည်။ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားကြမည့် မြန်မာလူငယ်များ အတုယူစရာအဖြစ် ဖေါ်ပြပါသည်။ ဘ၀အစပြုခြင်း Page 10
17. Alternate ◌နnergy- China Li Yanhong (အင်္ဂလိပ်အမည် ရော်ဘင်) ကို CEO တွေထဲမှာ ရုပ်အဖြောင့်ဆုံးလို့ Tianfu Morning Post မှဖေါ်ပြသည်။ ၁၉၆၈တွင် Shanxi ပြည်နယ်တွင်မွေးဖွားပြီး ပီကင်းတက္ကသိုလ်မှ IT ဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ ထိုနောက် အမေရိကန်နယူးယောက်တက္ကသိုလ်သို့ ထွက်ခွာပြီး မစ္စတာဘွဲ့သင်ကြားခဲ့သည်။ အပြောင်းလဲကြီး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် Dow Jones တွင် ၀င်လုပ်ကိုင်သည်။ Wall Street Journal ဆော့ဝဲအွန်လိုင်းတီထွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အင်တာနက်ရှာဖွေစက် Search Engine အတွက် hyperlink analysis ကို မူပိုင်ခွင့်တင်နိုင်ရာမှ Search Enginer Expert ပညာရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၉တွင် တရုပ်ပြည်ပြန်လာပြီး ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုရသည်။ သူ၏ Baidu ဟုခေါ်သော Search Engine ဒီဇိုင်းကို တရုပ်ပြည်တွင်းပညာရှင်များနှင့် တရုပ်စာ (Mandrain) ကိုအသုံးပြု ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်ကြီးစိုးနေသော Yahoo, Google တို့ကို လုံးဝ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ဆန်းစစ်မှုအရ တရုပ် Search Engine ဈေးကွက်ကို ၇၃% လွှမ်းမိုးထားသည်။ Google တရုပ်ပြည်မှ ထွက်ခွာခြင်းသည် Baidu အတွက် ဈေးကွက်ပိုရရှိသွားသည်။ သူ့အကြောင်း ၂၀၀၅ တွင် Baidu ကို အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက် Nasdaq ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ရင်နှီးငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၉သန်း ရရှိခဲ့သည်။ ပထမနေ့တွင်ပင် ရှယ်ယာဈေးမှာ ဒုံးပျံအလား ၃၅၄% အထိ တက်သွားသည်။ ၂၀၁၁ တွင် Baidu ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ သန်းရှိပြီး၊ ၈၈%အမြက်ငွေ ဒေါ်လာ၁၉၀၀သန်း အမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ Hardware ဈေးကွက်သို့လည်း တရုပ်ပြည်အတွက် အဆင့်နိုမ့် စမတ်ဖုန်းများ ဖြင့် ၂၀၁၂တွင် လုပ်ကိုင်လာသည်။ Baidu ဆိုသော အမည်သည် မဆုတ်မနှစ် အကြံထုတ်ရှာဖွေခြင်းအကြောင်း လှပသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး ရွတ်ဆိုသည့် နန်းစဉ်ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်သည်။ Steve Jobs နှင့်အနည်းငယ် တူညီသောအချက်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သူ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို Baidu တီထွင်၊ဆန်းသစ်မှုများအကြောင်း တင်ပြအစီရင်ခံတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် သူ၏တင်ပြမှုကို အမျိုးသမီးထုကြီးက ပိုမိုကြိုဆိုကြသည်။ အားလပ်ချိန် Tango အကကို တီဗွီရှိုးများတွင် ကပြလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၈၀၀ သန်းဖြစ်သည်။ တရုပ်ပြည်တွင် Page 11
18. Alternate ◌နnergy- China တတိယအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည်။ ဘ၀အစပြုခြင်း Gary Wang - ၁၉၆၈တွင် Fuzhou တွင်မွေးဖွားခဲ့သော အင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပတွင်နေထိုင်ကြီးပြင်းလာပြီး ကွန်ပြူတာပညာကို အမေရိကန်နိုင်ငံ John Hopkins တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ MBA ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည် ပြန်လာပြီး ဂျာမဏီမီဒီယာအုပ်စုတစ်ခု Berteslmann ပိုင်သော BOL China တွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကြီး Podcasting လူကြိုက်များနေချိန်မှာ လူတိုင်း ကိုယ့်နှစ်သက်ရာတင်ပြနိုင်မဲ့ အခြေခံပလက်ဖေါင်းတစ်ခုကို Wang တီထွင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅တွင် tudou.com အင်တာနက်ဗွီဒီယို စတင်ခဲ့သည်။ လူအများ မိမိတို့ဗွီဒီယိုများကို အင်တာနက်တွင် တင်နိုင်ပြီး ထိုဗီဒီယိုများကို အာရှတိုက် တီဗွီရှိုးတစ်ခုအဖြစ် ပြသခဲ့သည်။ ကြီးပွားလာခြင်း Tudou စတင်သည်နှင့် ရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ ရောက်လာကြသည်။ ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၅သန်း ရရှိခဲ့သည်။ Page 12
19. Alternate ◌နnergy- China ၂၀၁၀တွင် ကြွယ်ဝသောစင်ကာပူအစိုးရ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု Temasek မှလည်း ဒေါ်လာ၃၅သန်း ရင်းနှီးထည့်ဝင်ခဲ့သ်ည။ အမေရိကန် စတော့ဈေးကွက်တွင် IPO လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ၁၇၄သန်း ထပ်မံရရှိခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း ၁၃% ရှိသော တရုပ်ပြည်တွင်ဗွီဒီယို အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင် Tudou သည် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းဗွီဒီယို စုစုပေါင်း သန်း၄၀အထိ တင်ထားနိုင်ပြီး တစ်လတွင် ပရိတ်သတ် သန်း၂၀၀ကျော် ကြည့်ရှုကြသည်။ နေ့စဉ် streaming 1 petabyte (1000 terabytes) ရှိသည့် ဗွီဒီယိုမြောက်များစွာ လိုင်းပေါ်ရှိနေသည်။ ၂၀၁၂ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပြိုင်ဖက်ဗွီဒီယိုအင်တာနက် Youku နှင့်ပေါင်းလိုက်ပြီး၊ နှစ်ခုပေါင်း ဒေါ်လာ၁၁၀၀ တန်ဘိုးရှိလာသည်။ တရုပ်ပြည်၏ အွန်လိုင်ကြေငြာများဈေးကွက်ကို ၃၆% ရရှိထားသည်။ တရုပ်ပြည်တယ်လီဗေးရှင်း on-demand TV Station ကြည့်သူသန်းပေါင်း ၄၉၀ ရရှိထားသည်။ Youtube ရရှိထားသော ကြည့်သူသန်းပေါင်း ၈၀၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အပမ်းဖြေခြင်း CEO အလုပ်တွင် သူ့အမှုထမ်းများကို အချိန်မတင်းကျပ်စေပဲ လုပ်ကိုင်စေသလို၊ ကိုယ်တိုင်လည်း အပမ်းဖြေတတ်သည်။ ဥပမာ.. ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧ၀ရက်တောင်တက်ခဲ့သည်။ တောင်တက်ခရီးသွားစဉ်လည်း ကုမ္မဏီအီးမေးများ ဖတ်ရှု၊အကြောင်းပြန်တတ်သည်။ iResearch အရ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂၀၀ သန်းဖြစ်သည်။ Page 13
20. Alternate ◌နnergy- China ဘ၀အစပြုခြင်း Jack Ma ၁၉၆၄တွင် မွေးဖွားပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ၁၉၇၀နှစ်များတွင် Hangzhou ဒေသ၌ ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဟိုတယ်မှကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို စက်ဘီးတစ်စီးဖြင့် သူတို့မြို့လေးကို လိုက်လံပြသည့်အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်နိုင်ရုံမက ပြင်ပကမ္ဘာကြီကိုလည်း မြင်လာစေသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ နှစ်ကြိမ်ကျရှုံးပြီးသည့်နောက် ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတက်ပြီး ၁၉၈၈တွင် အင်္ဂလိပ်ဆရာဘ၀ ရောက်ခဲ့သည်။ Hangzhou Dianzi University တွင်ဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကြီး ၁၉၉၅တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုအတွက် အင်္ဂလိပ်စကားပြန်အဖြစ် လိုက်သွားခွင့်ရခဲ့သည်။ ပထမဆုံး အင်တာနက်နှင့် စတင်ထိတွေ့ရသည်။ တရုပ်ပြည်အကြောင်း အွန်လိုင်းတွင် မရှိသလောက်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ တရုပ်ပြည်ပြန်ရောက်ပြီး ဒေါ်လာနှစ်ထောင် $2000 ချေးယူကာ တရုပ်အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည်၏ ပထမဆုံး အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မကြာမီ ပြိုင်ဖက် China Telecom နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပီကင်းမြို့တွင် တရုပ်အစိုးရအတွက် e-commerce ၀င်လုပ်ခဲ့သည်။ Page 14
21. Alternate ◌နnergy- China ကြီးပွားလာခြင်း သိပ်ကြာကြာ အစိုးရအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ ၁၉၉၉တွင် ဒေါ်လာ ခြောက်သောင်း ($60,000) ဖြင့် အလီဘာဘာ Alibaba.com အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်စီးပွားလုပ်ငန်းများ အချင်းချင်း ကုန်သွယ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ပြည်ပမှ သွင်းကုန်၊ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ပထမတွင် သူ့တိုက်ခန်းကလေးမှ လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်မှာ Softbank ကဲ့သို့သော အကြီးစားရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများကြောင့် လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရှယ်ယာ ၄၀% ကို ရာဟူး Yahoo သို့ $1 billion ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း Dotcom ဒေါ့ကွန်းများ အောင်မြင်စဉ်က Ma သည် အလျှင်အမြန် တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည်ထုတ်ကုန်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၀၂ နှစ်ကုန်တွင် အမြက်အစွန်များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၀က်ဆိုဒ်သည် အလွန်တိုးတက်လာပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၅၆သန်းရှိလာသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၄၀ကျော်မှ အသုံးပြုလာကြသည်။ အလီဘာဘာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ တခြား လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်း ၀က်ဆိုဒ်ဖြစ်သော Taobao ကို ၂၀၀၃တွင် စတင်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာအများဆုံးကြည့်ခံရခြင်း တစ်နေ့ကို သန်းပေါင်း၅၀ 50 million unit visitors per day ဖြစ်လာသည်။ ပစ္စည်းပေါင်း သန်း၈၀၀ကျော် အရောင်းစာရင်း တင်ထားသည်။ Taobao သည် အများပိုင်မဟုတ်သည့် အင်တာနက်ဆိုဒ်များတွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဟု အချို့ကဆိုသည်။ Yahoo နှင့်ခွဲခွာခြင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသော အလီဘာဘာ သည် Yahoo သို့ရောင်းထားသော ၄၀% ရှယ်ယာများကို ပြန်ဝယ်ဖို့ ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Yahoo အကြီးအကဲ Jerry Yang ရာထူးဖယ်ပေးလိုက်ပြီးသည့်နောက် Alibaba နှင့် Yahoo တို့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာသည်။ အလီဘာဘာ မှ ရာဟူးကို $7.1 billion ငွေသား(သိုမဟုတ်)စတော့ဖြင့် ရာဟူးရှယ်ယာတစ်ဝက်အတွက် ပေးမယ်ဟု ကြေငြာသည်။ လက်ကျန်ကို အလီဘာဘာအုပ်စု အများပိုင်လုပ်ပြီးမှ ၀ယ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ရယ်စရာ Jack Ma ကပြောပြသည်။ တစ်နေ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင် သူထိုင်ပြီး၊ အလီဘာဘာ ဆိုသည့်နာမည် အလွန်ကောင်းကြောင်းစဉ်းစားနေသည်။ ကော်ဖီဆိုင် စားပွဲထိုးမိန်းကလေး ရောက်လာ၍ အလီဘာဘာဆိုတာ သိသလား ဟု မေးကြည့်သည်။ စားပွဲထိုးက သိပါသည် ..ဖြေသည်။ ဒါဆို အလီဘာဘာဆိုတာ ဘာလဲ ..ဟု ထပ်မေးသောအခါ အလီဘာဘာနဲ့ခိုးသားငါးရာ ဟုဖြေပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ လူတွေအားလုံး အလီဘာဘာဆိုတာ သိကြသည်။ တခြားနာမည် Alimama ကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ Page 15
22. Alternate ◌နnergy- China Jack Ma ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ကန်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ သန်းဖြစ်သည်။ Hurn Rich 2011 တွင် အဆင့် ၁၀၉ ဖြစ်သည်။ Note အလီဘာဘာဝက်ဆိုဒ်တွင် လိုချင်တာအားလုံးရှိကြောင်း၊ ယခင်က ကျွနိုပ်သိခဲ့သော်လည်း မြန်မာပြည်မှ မြန်မာများနှင့် အလှမ်းဝေးတယ် ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ယခ 2013ု import/export (ပစ္စည်းအမျိုး၅၀၀ကျော်၊ ကျောက်စိမ်း၊ ကျွန်းသစ်မပါ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ) ကို တရုပ်ပြည်အနှစ်၂၀ကျော်က ပုံစံ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။ လိုင်စင်မလို၊ ကုမ္မဏီမလို ကုန်တိန်နာ၊ သွင်း၊ထုတ်နိုင်ပြီ ဆိုပါသည်။ လူတွေမလုပ်တတ်ဘူး၊ မလုပ်ရဲ ဖြစ်နေပါသည်။ import/export လုပ်ငန်းများကို ပိုက်ဆံ၊အာဏာရှိသူများသာ ချုပ်ကိုင်ထားသည်မှာ ကြာပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် ပိုနေတဲ့ကုန် (လယ်ယာထွက်ကုန်များ)၊ ကွန်တိန်နာတစ်ခုစာလောက် လူငယ်များစုပေါင်းပြီး သွင်း၊ထုတ် လုပ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ မကြာခင်အတွင်း မကြာခင် လူငယ်သူဌေးများသည် ခရိုနီများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တော့မှာဖြစ်သည်။ လောလောဆယ် Alibaba.com ကိုနှိပ်ကြည့်ပါ။ အားလပ်ချိန် Leisure Time တွင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားသည့် ပစ္စည်းများကို Type လုပ်ပြီး Search လုပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ .. Solar Power 500kw, Generator 500w, laptop, iPhone, myanmar rice, myanmar teak, myanmar jade, used japan car ..etc. ထူးခြားတဲ့အမြင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ ဘ၀အစပြုခြင်း ၁၉၆၀ မွေးဖွားခဲ့သော Zhang Lan ဖခင်သည် ပီကင်းမြို့၊ Tsinghua တက္ကသိုလ် Page 16
23. Alternate ◌နnergy- China ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က သူ့ဖခင်ကြီး နိုင်ငံရေးပြသနာကြုံတွေ့စဉ် သူမကို Hubei ကျေးရွာသို့ ကေဒါပညာသင် အဖြစ်စေလွှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူပြီး ပညာဆက်လက်သင်ကြား၍ ကောလိပ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် နှစ်အနည်းကြာကြာ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရန်တိုမြို့သို့ အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့သည်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အသားခုတ်ခြင်း၊ ပန်းကန်ဆေးခြင်း စသည့်အလုပ်များ လုပ်ခဲ့သည်။ အပြောင်အလဲကြီး ကနေဒါမှာအလုပ်လုပ်ရငွေများ ဒေါ်လာ နှစ်သောင်း US$20,000 ကို ၁၉၉၁မှာ တရုပ်ပြည်ပြန်ယူလာပြီး၊ seafood restaurant လုပ်ငန်းစတင်ပါတယ်။ အောင်မြင်သည်။ ဒေါ်လာတစ်သန်းလောက်ထိ စုဆောင်းမိလာသည်။ ကြီးပွားလာခြင်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာတော့ သူမစုဆောင်းရငွေများကို South Beauty restaurant မှာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံလိုက်သည်။ ခေတ်မှီ စီချွမ်အစားသောက် Sichuan cuisine ကို အဆင့်မြင့်အခန်းတွင်၊ ဈေးနှုန်းကြီးကြီးဖြင့် ရောင်းခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်တရုပ်အစားအသောက်ဆိုင်များ မရှိသေးသော အချိန်ကာလဖြစ်သောကြောင့် ထိုအကြံအောင်မြင်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်တရုပ်စားသောက်ဆိုင်ကို ပီကင်းမြို့၏ ဈေးအကြီးဆုံးသော အဆောက်အဦ၊ China World Trade Tower တွင် ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ခန်းငှားခ ဈေးကြီးလှသော်လည်း ကြံကြံခံဖွင့်ခဲ့သည်။ မကြာခင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကြားတွင် စားသောက်ဆိုင်နာမည်ရလာသည်။ သူမအကြောင်း South Beauty သည် တရုပ်ပြည်၏ ကနဦး အဆင့်မြင့်တရုပ်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀နှစ်လည်လောက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၅၆ခု ဖြစ်လာသည်။ Louis Vuitton ကုန်စုံဆိုင်တစ်ခုရှိသော တရုပ်ပြည် မြို့တိုင်းတွင် South Beauty အဆင့်မြင့်တရုပ်စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုဖွင့်ရှိရန် ကြံစည်ထားသည်။ မတည်ငွေ ဒေါ်လာ ၄၃.၉သန်း အရင်းအနှီးဖြင့် ရည်မှန်းချက်ရောက်မည်၊ တကမ္ဘာလုံးတွင်လည်း အလားတူ ဆိုင်ပေါင်း ၂၀၀ ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Zhang ပိုင်ဆိုင်သော Lan ဟုခေါ်သော လူကုန်တန်ကလပ်အသင်းတစ်ခု ပီကင်းမြို့တွင်ရှိသည်။ Phillippe Stark အတွင်းဒီဇိုင်းလုပ်ပေးမှု တန်ဖို့ ဒေါ်လာ၁.၅သန်း ကျသင့်သည်ဟု သတင်းထွက်သည်။ Zhang က တန်သည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိအချိန် ၂၀၁၂တွင် စားသောက်ဆိုင်များ လုပ်ငန်းကို ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အများပိုင်လုပ်ရန်ရှိသည်။ သင့်လျှော်သည့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိသည်။ South Beauty အများပိုင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း၁၀၀မှ သန်း၂၀၀ ရရှိနိုင်မည်ဟု မှန်းထားသည်။ Page 17